DEG DEG Dagaalkii Sadexaad Hindia Iyo Chinaha oo Maraykanka Ku Biiriyey Ciidankiisa - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDEG DEG Dagaalkii Sadexaad Hindia Iyo Chinaha oo Maraykanka Ku Biiriyey Ciidankiisa
DEG DEG Dagaalkii Sadexaad Hindia Iyo Chinaha oo Maraykanka Ku Biiriyey Ciidankiisa
June 29, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 0
Iyada oo saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga Hindiya ay rajaynayaan in ay muddo dheer Ka Hortagaan xuduuda Shiinaha iyo India, Maraykanka Ayaa lagu soo waramayo in uu taageero siinayo Hindiya.
Millatariga Shiinaha ayaa muujinaya diyaar garow milatari oo dhinac walba ah, iyada oo ah jimicsi millatari oo isku mar ah oo isku xidha Badda Koonfurta Shiinaha. , u dhaw jasiiradda Taiwan iyo xudduudka Shiinaha iyo India ayaa muujinaya Walaaca ay Hindiya ka qabto ka faa’iideysiga taageerada Mareykanka kaliya waa khayaali, falanqeeyayaasha Shiinaha ayaa sidaas sheegay Axadii.
Taliyaha ciidamada Hindiya MM Naravane ayaa Raiisul wasaaraha India Narendra Modi iyo wasiirka gaashaandhigga Rajnath Singh uga warbixiyay xaalada gobolka xuduudeedka ka dib markii uu ka soo laabtay booqashadii uu ku yimid Jimcihii, ciidamada Hindiya waxay rajaynayaan in Tageerada Maraykanka Muhim u tahay , warbaahinta India ayaa werisay. Sabti.
Shiinaha ayaa geeyay dayuuradaha dagaalka ee Su-30 dagaalyahanno H-6 Meel U dhow gobolka xuduuda,Dhanka Hindiya ayaa Sabtidii Iyadana Geysey nidaamka difaaca hawada ee Akash ee Ladakh.
Tallaabadan cusub ee Hindiya ayaa timid kadib markii Xoghayaha Arimaha Dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu Khamiistii sheegay in Mareykanku uu yareyn doono tirada ciidamada ee ku sugan Jarmalka isla markaana loo geyn doono meelo kale si loo wajaho khatarta Shiinaha ee Hindiya iyo waddamada Koonfur-bari Aasiya, wakaaladda wararka Hindiya ee PTI ayaa werisay. Jimce.
Mareykanka ayaa muddo dheer rajeynayay inuu India ugu ciyaaro sidii kaar istiraatiijiyadeedii ay ku xakameyn laheyd Shiinaha, waxayna hadda u adeegsaneysaa Tageerada India ee xiisada xadka Shiinaha iyo Hindiya, falanqeeyayaasha Shiinaha ayaa yiri.
Si kastaba ha noqotee, dhinacooda, waxay rajo wanaagsan ka qabaan in Mareykanka uu u yimaado gargaarkooda wuxuuna ka caawin doonaa inuu hoos u dhigo ciidamada Shiinaha ee ku sugan Badda Koofurta Shiinaha iyo Taiwan Straits oo fursad u siineysa India khilaafaadka xadka, ayay yiraahdeen.
Kaliya tani waa mala-awaal ay sameeyeen Ciidanka Hindiya oo aan matali karin hoggaanka Hindiya, maaddaama Mareykanku kaliya ka faa’iideysan doono Hindiya si loo xakameeyo Shiinaha oo ay u badan tahay inuusan safka hore ka gali doonin dagaalka.
“Istiraatiijiyad” ku xeeran “Shiinaha waa mid Aysan fahmi karin Reer Galbeedka, Wei Dongxu, oo ah khabiir militari oo fadhigiisu yahay Beijing, ayaa u sheegay wargayska Global Times Axadii.
Ciidamada xoreynta shacabka Shiinaha (PLA) waxay leeyihiin diyaar garow dagaal aad u sareeya dhankasta, laakiin in kasta oo xiisado ay jiraan, qatarta iskahorimaadka milatari ee aadka u weyn ayaa ah mid ay ugu wacan tahay awooda iyo isbadalka istiraatiijiyadeed ee PLA, Wei ayaa yidhi.
PLA waxay soo bandhigtay awoodda ay u leedahay inay sii waddo u diyaargarowga dagaalka sare ee gobolladan kala duwan oo leh hawlgallo millatari oo isku mar ah,Iyadoo Chiinaha Isku Xidhay Difaaceeda Ilaa Koonfurta Iyo xadka Hindia.
Layliyo militari ayaa lagu qaban doonaa biyaha Xeebta Xisha ee ku taal Badweynta Shiinaha Arbacada ilaa Luulyo 5, sida lagu sheegay ogeysiis ay soo saartay Maamulka Badbaadada Badda Shiinaha.
DAAWO VIDEO:Faroole oo Weeraray Farmaajo Kana Horyimi Maqaamkii Lasiiyey Gobolka Banaadir.